राजनीति Archives - ताजा समाचार
Posted in ब्यानर न्यूज, राजनीति
ताजा समाचार । २७ असोज, काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । यसअगाडी असोज १३ गते नै ताजा समाचारमा सरकारले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । आज बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डलाई) बर्खास्त्री पर्ने भनेर ८ जना मन्त्रीको नाम पढेर सुनाएका थिए । ८ जनाको नाम सुनेपछि प्रचण्डले यस विषयमा फेरी सोच्नुहोस भनेपछि २ जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर ६ जना वर्खास्त गर्न सकिने कुरामा दुवै अध्ययद्वयहरु राजी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु मात्रिका यादव, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा, बिना मगर, युवराज खतिवडा, चक्रपाणी खनाल, शक्ति बस्नेत र रघुबीर महासेठको नाम पढेर सुनाएका थिए । तर, प्रचण्डले केही मन्त्रीको व
ताजा समाचार । २७ असोज, काठमाडौं : काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी गएकोप्रति पोर्टफोलियो चासो बढेको छ । शनिबार अपरान्ह सी काठमाडौं ओर्लदा राष्ट्रपति भण्डारीसंगै उनकी छोरी पनि प्लेनसम्मै पुगेकी थिइन् । उनी कुन हैसियतमा पुगेकी थिइन् भनेर प्रोटोकलमा राख्ने जानकारहरु अचम्ममा परेका छन् । राष्ट्रपतिकै छोरीको हैसियतमा उनी राष्ट्रपति भण्डारीसंग जान मिल्दैन । तर विमानस्थलमै उनी जानुलाई भने प्रोटोकल जानकारहरु निको मान्दैनन् । जबकि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतसमेत सीलाई स्वागत गर्न भीभीआईपी लबिमा बसेका थिए । यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकी छोरी के हैसियतले अगाडि पुगिन् भन्ने कुरा धेरेको आश्चर्यको विषय भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शनिबार सीलाई स्वागत गर्न केही समय ढिला गरी पुगिन् । उनी प्लेनको भर
Oct62019 by ताजा समाचारNo Comments
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडादशैँको उपलक्ष्यमा देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ । एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभियानमा बडादशैँले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस् भन्नु भएको छ । ‘राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकेर हामी अहिले समृद्धिको यात्रामा छौँ । यस यात्रामा समृद्धिसँगसँगै समाजलाई सभ्य, मित्रतापूर्ण, शान्तिपूर्ण र आत्मीयतापूर्ण समाजका रूपमा पनि विकास गर्न सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। ‘जारी सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएकाे छ । दशैँ लामो समयदेखि हामीले मनाउँदै आएको एकता र पुनर्मिलनको चाड हो भन्दै उहाँले आफन्त र छिमेकीहरूका बीचमा भेटघाट र शुभकामना आदानप्रदान गरेर अत्यन्तै हार्दिकता र मित्रताका साथ मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानम
सुनसरी। संघीय समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी युवा संघ का प्रदेश- १ समितिका अध्यक्ष श्री सुब्बालाई धरान प्रहरीले प क्राउ गरेको छ। धरान १५ स्थित वगरकोटमा शुक्रबार राति होटलमा मा दक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला गरिरहेको अवस्थामा उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले प क्राउ गरेको हो । मा दक पदार्थ से वन गरी बगरकोट स्थित भेण्डेज लाउज सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई दु र्व्यव हार गरेको उजुरी परेपछि त्यहाँ पुगेका प्रहरीलाई समेत उनले दु र्व्यव हार गरेका थिए। साेही कारण सुब्बालाई शुक्रबार रातिनै प क्राउ गरिएको इलाका प्रहरी धरानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक ढुण्डिराज न्यौपानेले जानकारी दिए । सुब्बा लामो समयदेखि गु ण्डाग र्दी तथा असुलीमा संलग्न रहेको मौखिक उजुरी परेपछि उनी खोजीको सुचीमा रहेकाे प्रहरी नाउव उपरिक्षक न्यौपानेले बताए। ‘सुब्बा वि रुद्ध हामीकहाँ व्यापारीहरुलाई ध म्क्या एर च न्दा अ सुली गर्देै
काठमाडौँ / दक्षिणकाली नगरपालिकाको उपप्रमुखले सुविधामा पाएको गाडी नलिने निर्णय लिएकी छन् । जनतालाई सुविधा दिने तहमा पुगे पछि जनप्रतिनिधि आफ्नै तलव, भत्ता, सेवा सुविधा बढाउने तर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख बसन्ती डंगोल तामाङ्गले तेस्रो नगर सभाले उपप्रमुखको सुविधाको लागी पारित गरेको ३० लाख बराबरको गाडी लिन अस्वीकार गरेकी हुन् । ०७५/०७६ का लागी बसेको तेस्रो नगर सभामा पारित भएको उक्त रकम उपप्रमुख तामाङ्गले आफ्नो सुविधा भन्दा नगरभित्रको विकासका लागी बजेट आवश्यक रहेको बताइन् । तामाङ्गले उक्त बजेटबाट २५ लाख प्राविधिक शिक्षाको लागी कामधेनु मा.विलाई कृषि प्राविधिक विद्यालय संचालन गर्न र एम्बुलेन्स खरिदका लागी पाखाचोक सप्ताह मूल समारोह समिति र सोचन्द भैरव युवा क्लवको संयुक्त आयोजनामा संचालन गरीएको सप्ताहबाट संकलित रकममा ५ लाख थप गरी एम्बुलेन्स खरिदमा सहयोग गर्ने घोषणा ग
काठमाडौं। पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अरु कसैले देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्चले आयोजना गरेको एक विशेष समारोहमा सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले प्रचण्ड क्रान्ति र शान्तिको एकैपटक नेतृत्व गर्न सक्ने आदर्श नेता भएको बताए । धमलाले प्रचण्डको तारिफ गर्नुमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएकोसमेत उल्लेख गरे । उनले नेपाली नेताहरुमा प्रचण्ड सफा हृदय भएको नेता भएको बताउँदै अब नेपालको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने दायित्व प्रचण्डकै काँधमा भएको धारणा राखे । यस्तो छ धमलाले प्रचण्डबारे बोलेका शब्दः अध्यक्ष प्रचण्ड विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्ति हुन् । हाम्रो देशमा क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व एकैचोटी यदि विश्वमा कसैले गरेको छ भने त्यो प्रचण्डले गरेको छ । हामीले प्रष्टरुपमा भन्नुपर्छ नेपाली राजनीतिमा उहाँमा जुन किसिमको क्षमता, दुरदर्शि
काठमाडौँ, असोज १६ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारले प्रदान गरेको सुविधा फिर्ता गरेका छन् । सरकारी सुविधामार्फत आफुले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधन र सुरक्षाकर्मी विहीबार फिर्ता गरेका हुन् । सभामुखबाट राजिनामा दिएपछि आफुले चढ्दै आएको बा २ झ १२६८ नम्बरको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । त्यसैगरि उनको सुरक्षाका लागि क्याप्टेनको नेतृत्वमा खटिएको १७ सैनिक र इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा खटिएको ११ जना प्रहरी फिर्ता गरेका छन् । महरामाथि संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीले यौ न दुराचारको आरोप लगाएपछि सभामुखबाट राजिनामा दिएका थिए । पदबाट राजिनामा दिएपछि भने आरोप लगाउने महिलाले आफुमाथि महराले जबरजस्ती नगरेको बताएकी छिन् । महराको राजिनामासँगै रिक्त्त भएको सभामुख पदमा अब नयाँ अनुहार को हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । सभामुखको लागि ७ जनाको नाम अगाडी आएको छ त्यसमध्ये
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कृष्ण बहादुर महरा प्रकरणमा महिलाले बयान फेर्नु शंकास्पद रहेको बताएका छन्। बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै गुरुङले पीडित महिलाको बयानको भिडियो बाहिर आएको एक दिन नबित्दै बयान फेरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताएका छन्। प्रमाणसहित मिडियामा आइसकेको र यसैको आधारमा महराले राजिनामा दिसकेको हुँदा गम्भीर भएर घ*टनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने गुरुङले बताएका छन्। पत्रकार सालिकराम पुडासैनी प्र*करण कुनै किटानी जाहेरी बिना भिडियोकै आधारमा रवि लामिछाने प*क्राउ परेको उल्लेख गर्दै गुरुङले महरा माथि पनि अनुसन्धान थालिनुपर्ने बताएका छन्। पिडित भनिएकी महिलाले दबाबमा आएर बयान फेरेको हुन सक्ने गुरुङको अनुमान छ। गच्छेअनुसार ललाई, फकाई, लोभलालच देखाई, ड*र, त्रा*स, द*बाब आदि जुनसुकै हर्कत गरेर बयान फेर्ने चलनले गर्दा यस्ता घट्नाहरु झन्झन् बढ्दै गइराखेको उनले तर्क गरे
कृष्णबहादुर महरा जबर जस्ती कर णी मा फसेपछि संघीय संसदको सभामुख पद रिक्त छ । उक्त पदको लागि आकांक्षीहरुले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् । संविधानमै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले अब सभामुख को बन्छ ? भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले रुचि देखाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै आफ्नो रुचिबारे जानकारी गराएका छन् । ओलीले पनि नेम्वाङलाई नै उक्त भूमिकामा उतार्न खोजेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय सदनको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठेपछि ओली पनि निवर्तमान सभामुख महराप्रति रुष्ट बनेका थिए । महराको यौ न काण्ड त ओलीको लागि ‘कुचोले बढानुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो’ भनेझैं भयो । नेम्वाङ सभामुख भए सदनको प्रभावकारिता बढ्ने र सरकारका
प्रतिनिधि सभा नेतृत्वविहीन भएपछि सभामुखको दाबेदारीको रुपमा सत्तारुढ नेकपाभित्र विभिन्न नेताहरुको नाम अगाडि सारिएको छ । बला त्कार को आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले दिएको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको छ । महराले राजीनामा दिएसँगै विभिन्न सांसदहरुको नाम चर्चा चले पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेताहरुको फरक फरक दाबेदारी देखिन थालेको छ । महरालाई सभामुख बनाउँदा दलीय भागबण्डामा गरिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीले भागबण्डा गरेर सभामुखमा महरा र उपसभामुखमा डा. शिबमाया तुम्बाहाङफेलाई निर्वाचित गराइएको थियो । महरा माओवादीको कोटामा थिए भने तुम्बाहाङफे एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन् । अहिले दुवै पार्टी एक भएर नेकपा गठन भएको र यसबीचमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, पूर्वसहमति र शर्त सभामुख चयनमा लागू नहुने पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरुले बताउन थालेका छन् । यस कारण तत्क